Niteraka resabe tao amin’ny tambajotra sosialy ny mariazy mipoapoaka nataon’ny fianakavian’ny mpanao politika any Angola · Global Voices teny Malagasy
Voalaza fa mitentina 2.000.000 dolara eo ho eo ilay fampakaram-bady
Voadika ny 20 Oktobra 2019 18:48 GMT
Ny mpanambady Lizandra Dias dos Santos sy Fernando Coelho da Cruz | Pikantsarin'ny lahatsary fampakaram-bady [8.10.2019]
Niteraka fahatezerana tao amin'ny tambajotra sosialy tao amin'ny firenena ny fanambadian'i Lizandra Dias dos Santos sy i Fernando Coelho da Cruz, zanakavavin'ny filohan'ny Antenimieram-pirenena Angoley sy ny zanak'adahin'ny vadin'ny filohan'ny repoblika.
Nilaza ny vavahadim-baovao Club-K Angola fa nitentina roa tapitrisa dolara teo ho eo ity fampakaram-bady ity, saingy tsy nolazainy ny loharanom-baovao. Nilaza ny vavahadin-tserasera fa nizara ho dingana telo ny fanambadiana: ny andro voalohany , ny 26 Septambra, natao tao amin'ny Jardim da Cidade Alta ny lanonana tamin'ny fisoratam-panambadiana. Ny andro faharoa, narahin'ny fety nokarakarain'ny mpampihaingo toerana Arabo iray tao amin'ny tranobe lapa tao amin'ny Marginal de Luanda, izay toeram-bahoaka ny fanamasinana tany am-piangonana. Ny andro fahatelo, nisy fety hafa natao ihany koa tao amin'ny Parque Heróis de Chaves, toerana fialambolim-panjakana izay eo ambany fitantanan'i Ana Paula dos Santos, vadin'ny filoha teo aloha.
Niparitaka be tao amin'ny tambajotra sosialy ny tsy fahafaliana sy ny fandoavana. Satria matin'ny mosary sy ny hetaheta noho ny haintany mafy ny mponina any amin'ny faritra atsimon'i Angola dia mihevitra ny mpisera fa fanompana ny vahoaka ny fety mihoa-pampana ataon'ny tompon'andraikitry ny governemanta toy izany.
Tsiahivina ihany koa fa nanao ny ady amin'ny kolikoly ho laharam-pahamehany tamin'ny fampielezan-keviny ny filohan'ny Repoblika, izay nasaina tao amin'ny mariazy.
Ohatra, nampiasa ny pejiny Facebook mba hanontany ny governoram-paritra ao Luanda i Tiogo Costa, talen'ny fantsona mahatsikaiky YouTube Goza Qui Tv:
Andriamatoa Sergio Luther Rescova Joaquim, mba maniktikitika ny saiko fotsiny: ny mariazin'ny zanakavavin'ny PAN izay ny PR João Lourenço no mpiantoka [sic] ary natao tany amin'ny toeram-bahoaka, ohatrinona moa ny hofany ?
Toy izao ihany koa: Ohatrinona no azon'ny GPL? Sa tsy izany? Amin'ny maha-hetsika tsy miankina izany, ao amin'ny toeram-bahoaka, ohatrinona no nalain'ny fanjakana ? AGT?
Na iza na iza ? Hay? # MIDADASIKA i Angola ”
Nanontany ny governora ihany koa i Joaquim Lunda tamin'ny fanomezana ny seha-bahoaka ho an'ny hetsika manokana:
Fanontaniana manitikitika ny saina fotsiny:
Tao amin'io toerana io izay nanaovana ny mariazy toy izany, satria seha-bahoaka izy io ary eo ambanin'ny fitantanan'ny LPG ary nisy hetsika manokana natao tao, azo antoka fa nanome alàlana ny sehatra ny Governemanta. FANONTANIANA: naloa ve sa nomena fotsiny “tamin'izao” ny hofan'ny toerana … .Eny !! Tsy izany manko fa… ..
Nandritra izany fotoana izany, niantso ny toe-draharaha ho aretina hitovizana ilay mpihira rap Flagelo Urbano:
Rehefa hitanao fa maka tahaka ireo rafitra ara-maritrano ao Roma ny tontolon'ny lanonan'ny fampakaram-bady, raha avy amin'ny feon'ny mozika adin'ny seza fiandrianana ny mozika lafika dia tsaroanao fa marina tokoa ny voalazan'i Paulo Freire. Rehefa tsy manana fahalalahana ny fanabeazana dia mitovy foana amin'ny an'ny mpampahory ny nofinofin'ireo ampahoriana.
Hita mibaribary ny toe-tsaina mitovy ananan'ireo olona ireo. Tena mampahonena ny fankamamiana izay rehetra avy any ivelany. Tsy niady ho an'ny fahaleovantena mihitsy izy ireo, ny fiatiana hatrany no tolona nataon'ireo sangany Angoley. Miaina tahaka ny Eoropeana izy ireo, mihinana tahaka ny Eoropeana, mivelona tahaka ny Eoropeana. Ary vola fotsiny no ilain'izy ireo any Angola satria any ivelany izy ireo no mipetraka …
Manofinofy izy ireo mba ho ankatoavina amin'ny fandaniana vola an-tapitrisany amin'ny rendrarendra, ary mampalahelo fa tena tian'izy ireo ny fotsy hoditra, toa mampihomehy. Ry tsy mahalala na inona na inona, feno fahabangana ara-panahy izay miteraka fanamavoana ireo olona izay manam-pitiavana kely indrindra ho an'ny hafa. Tian'izy ireo ny fomba fiainan'ny mpanjanantany hany ka alain'izy ireo tahaka avokoa ny zava-drehetra, na dia ny tsy fanaon'ny mpanjanatany aza dia alain'izy ireo tahaka, hany ka tsy ilaina ny fieboeboan'izy ireo mba ahatongavana amin'ny tena fahantrana fa ny vola sisa no fananan'izy ireo.
Tsy mariazy no hitantsika. Fa fampisehoana lehibe amin'ny fahefana ara-bola sy fieboeboana ary tsy fisian'ny fahaiza-misaina. Fomba fitafy manjelanjelatra, mofomamy tohatra enina…
Ho an'ilay artista Angoley malaza Puto Prata , tonga ny fotoana hanovana ny zotran'ny firenena:
Mahavita hopitaly, na sekoly, indrindra ny indostria hanomezana asa ho an'ny tanora ny teti-bola ankapobeny tamin'ity mariazy ity 🤨Andriamanitro ô, inona re ity mitranga aty amin'ny taniko ity e? Ozona tamin'ny rà latsaka tamin'ny ady ve 😭reraka ny saiko mieritreritra izany. Mba miangavy anareo aho mba hamaranana ity fijaliana sy fahorian'ny vahoakako ity 😥, afaka manatanteraka miaraka amiko ny eritreriny ankehitriny ireo lehilahy matanjaka eto Angola.
Namintina tao amin'ny Twitter, ilay mpikatroka Angoley sady mpihira rap Luaty Beirão hoe:
Koa satria tsy azo atao ho antom-pamotopotorana na fanadihadiana ny fibaribarin'ny harena avy ety ivelany dia tsy hahatsapa mihitsy ireo olona ireo fa tsy ilaina ny miafinafina. “Misoratra eny amin'ny tavanao.” Ohatrinona ny karama?
Tao amin'ny lahatsary iray navoaka tao amin'ny Facebook, nanatontosa horonantsary maneso iray mampiseho ny fisehosehoana tamin'ny fampakaram-bady nandaniana vola an-tapitrisany ny mpanao hatsikana Gilmário Vemba sy Kotingo. Nangataka ny vahoaka ihany koa izy ireo tao anatin'ity horonantsary manaraby ity mba hanome fanomezana ho an'ireo olona tratry ny haintany any atsimon'i Angola.